အမျိုးသားလွှတ်တော် | အမျိုးသားလွှတ်တော်
﻿ success fail Oct DEC Mar 14 2013 2014 2015 26 captures 13 Aug 2013 - 10 Jul 2016 About this capture COLLECTED BY Organization: Alexa Crawls Starting in 1996, Alexa Internet has been donating their crawl data to the Internet Archive. Flowing in every day, these data are added to the Wayback Machine after an embargo period. Collection: Alexa Crawls Starting in 1996, Alexa Internet has been donating their crawl data to the Internet Archive. Flowing in every day, these data are added to the Wayback Machine after an embargo period. TIMESTAMPS Welcome!
အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ သတင်းပို့ရန် ဒီဇင်ဘာ ၂၃
ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် (တနင်္လာနေ့) နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ က ခေါ်ယူထားရာ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်စာများကို အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ထံသို့ ပေးပို့ထားပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ၁၅၅ နှင့်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ၃၅တို့အရပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုနေပြည်တော်၌၁၃၇၅ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း၁၃ရက် (၂၀၁၄ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ၁၃ရက်) တနင်္လာနေ့နံနက် ၁၀း၀၀နာရ်ီတွင်စတင်ကျင်းပရန်ခေါ်ယူကြောင်းကြေညာလိုက်ပါသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ လူသားအရင်းအမြစ်မြှင့်တင်ပေးရေး JICA နှင့် ဆွေးနွေး ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ Japan International Cooperation Agency(JICA) Human Development Department မှ Chief Advisor Dr.Hiroshi SHIRAKAWA ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ဥက္ကဋ္ဌရုံးဧည့်ခန်းမ တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး ဒီဇင်ဘာ ၁၁
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြညိမ်းအား ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ House of Regional Representatives, Members of the Committee for International Relation H.E.Poppy Susanti Dharsono ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Hagay Moshe Behar တို့သည် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကော်မတီဆောင်၌ သီးခြားစီ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဒီဇင်ဘာ ၁၀
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်သည် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစားနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီး H.E.Mr.Hoang Tuan Anh ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Dec 24 2013 ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် (တနင်္လာနေ့) နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ က ခေါ်ယူထားရာ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်စာများကို အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ထံသို့ ပေးပို့ထားပါသည်။ more
Dec 24 2013 ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ၁၅၅ နှင့်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ၃၅တို့အရပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုနေပြည်တော်၌၁၃၇၅ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း၁၃ရက် (၂၀၁၄ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ၁၃ရက်) တနင်္လာနေ့နံနက် ၁၀း၀၀နာရ်ီတွင်စတင်ကျင်းပရန်ခေါ်ယူကြောင်းကြေညာလိုက်ပါသည်။ more
Dec 18 2013 အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ Japan International Cooperation Agency(JICA) Human Development Department မှ Chief Advisor Dr.Hiroshi SHIRAKAWA ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ဥက္ကဋ္ဌရုံးဧည့်ခန်းမ တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ more
ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈ ရက်မြောက်နေ့
ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး ၁၇ ရက်မြောက်နေ့
ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး ၁၆ ရက်မြောက်နေ့
ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်မြောက်နေ့
ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး
Copryright © 2013 National Parliament.All rights reserved.